Nnwom 56 - Nkwa Asem (NA-TWI) | Biblica
Nnwom 56 - Nkwa Asem (NA-TWI)
Select chapter 56
Onyankopɔn mu ahotoso mpaebɔ
1Hu me mmɔbɔ, O Onyankopɔn, efisɛ, mewɔ ɔtaa ase; m’atamfo taa me bere nyinaa. 2 Efi anɔpa kosi anadwofa nyinaa, m’atamfo ba me so. Dodow no ara ko tia me.
3 Sɛ mebɔ hu a, O Awurade Tumfoɔ, mede me ho to wo so. 4 Mede me ho to Onyankopɔn so enti minsuro. Mekamfo no wɔ nea wahyɛ ho bɔ no ho. Ɛdɛn na ɔdasani teta betumi ayɛ ama me? 5 M’atamfo haw me da mu no nyinaa. Bere biara, wɔfa adwene a wɔnam so bepira me! 6 Wɔboa wɔn ho ano wɔ nkokoam hwɛ biribiara a meyɛ pɛ sɛ wokum me. 7 Twe wɔn aso, O Onyankopɔn, wɔ wɔn amumɔyɛ ho. Di saa nnipa no so wɔ w’abufuw mu.
8 Wunim ɔhaw a mewɔ mu. Woabu me nusu a agu ano. Wonhyehyɛɛ no wo nhoma mu?
9 Ɛda a misu frɛ wo no, ɛda no na wobɛma m’atamfo asan wɔn akyi. Minim eyi; Onyankopɔn wɔ m’afa. 10 Awurade a mekamfo ne bɔhyɛ no. 11 Ne mu na me gyidi wɔ enti merensuro. Ɛdɛn na ɔdasani teta betumi ayɛ ama me? 12 O Onyankopɔn, mede nea mahyɛ wo ho bɔ no bɛma wo. Mɛbɔ wo aseda afɔre 13 efisɛ, woagye me afi owu ne nkogu mu. Enti menam Onyankopɔn anim wɔ hann a ɛhyerɛn wɔ ateasefo so no mu.
NA-TWI : Nnwom 56